Chii chaunofanira kuita kana mumwe wako achinyepa | Bezzia
Maria Jose Roldan | 07/06/2021 22:00 | Hukama
Haasi manyepo ese akafanana uye haana kufanana kuti uzviite usina mhosva, kuzviita nehuipi uye uchiziva kuti zvinokonzeresa kukuvadza kune mumwe munhu. Panyaya yevaviri ava, kunyepa kakawanda uye nguva zhinji kunoparadza imwe yeakakosha kukosha mune chero hukama: kuvimba.
Pasina kuvimba haugone kupa rutsigiro chero rudzi rwevaviri rwunogona kunzi rwakagwinya. Pasina mamiriro ezvinhu mumwe wevashandi anogona kubvumidzwa kushandisa nhema nguva dzose uye kana izvi zvikaitika, vanofanirwa kumiswa nekukurumidza sezvazvinogona.
1 Nhema mune vaviri
2 Zvekuita kana mumwe wacho achinyepa
Nhema mune vaviri
Ichokwadi kuti manyepo ari muchiedza chezuva uye mune zvevakaroorana izvi hazvisi izvo. Zvisinei, hukuru hukuru hwenhema idzi hunosanganisira kusiyanisa kwakasiyana chokwadi chinogona kubatsira kusimbisa mudiwa pachayo. Izvo zvinozivikanwa semanyepo machena uye ivo vanotsvaga pamusoro pezvose kupa hukuru chengetedzo uye simba kuhukama pachahwo. Zvakasiyana zvachose manyepo akadaro uye anokonzeresa kukuvara mukati mevaviri, kutoputsa kukosha kwakakosha sekuvimba pakati pevanhu vaviri.
Muchiitiko chekuti vaviri vacho vanogara vachiita nhema, zvakakosha kubvunza uye kuziva kuti sei achishandisa manyepo mukati mehukama. Kubva pano, vaviri vacho vari mukutungamira kwekusarudza kana vakasarudza kuenderera nehukama hwakadai kana kana zvisina kukodzera mukana wechipiri uye kucheka kurasikirwa kwavo. Zvisinei, haugone kutsungirira munhu anoreva nhema nekuti hukama hwacho hunogona kuva hunotyisa uye panenge pasisina mhando yekuvimbana pakati pemapato.
Hazvina kufanana kana kuti vaviri vakanyepa kamwe chete kana kuti vanozviita netsika. Kubva pano, munhu anonyengedzwa anofanira kuzvibvunza kana mumwe munhu akakodzera kuvimbwa uye kana achifanana nehunhu hunofanirwa kuve muhukama hwakanaka.
Muzviitiko zvese, kutaurirana uye kutaurirana mune vaviri vacho kwakakosha kana zvasvika pakugadzirisa chero mhando yematambudziko kana kunetsana kunogona kuitika. Kunze kweizvi, panofanirwa kuve nekuzvipira kune avo vanhu vaviri, sezvo zvisina kudaro chiri chinhu chinogona kuitika zvakare munguva pfupi kana yepakati.
Kuzviremekedza kwemunhu akuvara ndechimwe chinhu chekutarisa kana uchiregerera nhema. Izvo hazvisi nyore kana zvakapusa kuvaka patsva kuvimbana kwakaputsika uye kana mamiriro emanzwiro ari pasi zvingave zvakaoma kudzorera hukama kumashure. Ndokusaka kuzviremekedza muzviitiko zvakadaro kwakakosha uye kuchikosha. Iwe unofanirwa kuve uine chokwadi usati watora danho rakakosha rekuregerera munhu ari kunyepa nekumupa kechipiri mukana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Zvekuita kana mumwe wacho achinyepa